အဘယ်အရာက GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုအခြားသူများနှင့်ကွဲပြားစေသနည်း။ | Linux မှ
အဘယ်အရာက GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုအခြားသူများနှင့်ကွဲပြားစေသနည်း။
GNU / Linux ကမ္ဘာကြီးဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်တယ်၊ desktop ပတ် ၀ န်းကျင်၊ package နှင့် root directory ၏သဘောတရားသည်သုံးစွဲသူများကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာဤဒြပ်စင်များသည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်တစ်ခုအကြားသီးသန့်မဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့် "ကွဲပြားမှု" လို့ကတိပေးတဲ့ Linux ဖြန့်ချိရေးအကြောင်းဖတ်လိုက်တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုမေးတယ် -ဘာကမတူညီတာလဲ အခြားရှိပြီးသားသူမြား၏? အောက်မှာ parameters တွေကို podemos ခွဲခြား တကယ်ကိုတစ်ခု GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း ဒီစကြဝuniverseာကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာကြားမှာ?
ထောင်ပေါင်းများစွာသောဖြန့်ဝေမှုများအတွက်တူညီသောပရိုဂရမ်ကိုရရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့တစ်ခုစီတွင်ထည့်သွင်းထားသောအထုပ်သည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ package တစ်ခုအကြောင်းပြောသောအခါ program တစ်ခု install လုပ်ရန် operating system ကအသုံးပြုသော file ၏ format သို့မဟုတ် extension ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤဖိုင်ကိုဖြန့်ဖြူးရန်အတွက်ဖြန့်ဖြူးရန်အတွက်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောပရိုဂရမ်ကိုထည့်သွင်းရန်၊ ပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်အတွက်ကိရိယာများပါ ၀ င်သည့် package manager ရှိရမည်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပရိုဂရမ်များသည်ဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားမပြောင်းသော်လည်း (ဆိုလိုသည်မှာ Mozilla Firefox သည်ဖြန့်ဝေမှုအားလုံးတွင်မီးလျှံမြေခွေးဖြစ်လိမ့်မည်) ၎င်းသည်ထည့်သွင်းရန်အသုံးပြုသောအထုပ်သည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
deb: Debian နှင့်၎င်း မှလွဲ၍ အသုံးပြုသည်။
RPM: (Red Hat Package Manager) Red Hat မှဆင်းသက်လာပြီး Fedora, OpenSUSE, Mandriva, Mageia နှင့်အခြားသူများမှကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
PISI: Pardus မှဖြစ်သည်။
MO: Slax မှဖြစ်သည်။
PUP နှင့် PET: Puppy Linux ။
APT (terminal) နှင့် Synaptic (ဂရပ်ဖစ်) - Debian နှင့်၎င်းမှဆင်းသက်လာသူများမှအသုံးပြုသည်။
Zypper (terminal) နှင့် YaST (graphical) - OpenSUSE မန်နေဂျာဖြစ်သည်။
YUM: Fedora နဲ့ Yellow Dog Linux ။
Pacman: Arch Linux ။
dpkg - မူလ Debian မှဖန်တီးသည်။
Urpmi: Mandriva နှင့် Mageia ။
up2date: Red Hat ။
slapt-get, slackpkg နှင့် swaret - tgz packages များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန် Slackware အသုံးပြုသော "tools" အမျိုးမျိုး။
ငါဖြန့်ဖြူးအကြားအထုပ်မန်နေဂျာကိုပြောင်းလဲရန်အရေးကြီးပါသလား? ဟုတ်တယ်။ သင်မန်နေဂျာတစ် ဦး အားအခြားသူများကိုထိခိုက်နစ်နာစေရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်သင်တပ်ဆင်မည့်အထုပ်များကိုထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်ရှာဖွေနေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် package manager သည်ဖြန့်ဝေခြင်း၏ "အနှစ်သာရ" ၏အစိတ်အပိုင်းအများစုကိုသတ်မှတ်ပေးပြီး၎င်းကိုအခြားသူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားရန်အကောင့်ထဲသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်ကောင်းသောအချက်ဖြစ်သည်။ ငါ aptitude - zypper - yum war အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဥပမာများစွာရှိသည်ဖြစ်သော်လည်း SUSE ပရိသတ်များက Zypper သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေဆဲဟု SUSE ပရိသတ်များကကြေငြာခဲ့သည်။
မကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုသည့်နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြန့်ဝေမှုကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်အတွေ့အကြုံအဆင့်ဖြစ်သည်။ Newbies များသို့ဖြန့်ဝေရန်အကြံပြုသည့်အခါများသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ရှိသည် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်“ Gentoo ကိုသေတ္တာထဲမှကြိုးစားရန်ပင်စိတ်ကူးမထားပါ” သို့မဟုတ်“ Ubuntu သည်စတင်ရန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်”) ကိုမကြာခဏကြားရလေ့ရှိသည်။ ။
console တစ်ခုတွင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်ပမာဏ (ထိုအလုပ်အတွက်ဂရပ်ဖစ်အခြားနည်းလမ်းများမရှိပါ) ။
ဖြန့်ဖြူးခြင်းတပ်ဆင်ပြီးနောက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်သော configuration ကို၏အသံအတိုးအကျယ်။
တပ်ဆင်နေစဉ် disk အခန်းကန့်ကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်လျှင် (သို့) ၎င်းကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် "အလယ်အလတ် - အတွေ့အကြုံရှိသူ" အသုံးပြုသူများအတွက်မထောက်ခံသည့်ကျွမ်းကျင်သည့်အဆင့် (Gentoo, Linux From Scratch, Slackware, Arch) ကဲ့သို့သောဖြန့်ဝေမှုများကိုအုပ်စုလိုက်စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Linux ဖြန့်ချိမှုလမ်းကြောင်းများကမည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမဆိုပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့် Operating System ကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်လာသည်။ ဒီတော့တောင်မှစတင်သူများအတွက်ဖြန့်ချိမှုများ (Linux Mint, Ubuntu, Elementary OS, အခြားသူများအကြား) သည်ထူးခြားနေဆဲပင်။
၎င်းသည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအကြောင်းပြောသောအခါဖော်ပြသောပထမဆုံးအရာများမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ “ အရင်းအမြစ်များပိုမိုတောင်းခံရန်” (Windows) ကိုပိုမိုတောင်းဆိုလာသည့်စနစ်မှဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့် hardware အသစ်များနှင့်အမြဲတမ်းလိုက်နေရန်ကြိုးစားနေသည့်ကမ္ဘာတွင် hardware ပြန်လည်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်ဖြန့်ဖြူးသောနယ်ပယ်များရှိသည် (Puppy Linux, Slitaz, Tiny Core Linux) , AUSTRUMI, Slax, Lubuntu, Xubuntu, Alcolix, Damn Small Linux, Molinux စသည်တို့ဖြစ်သည်။ Linux Mint သို့မဟုတ် Arch ကဲ့သို့သောအခြား distros များကိုကွန်ပျူတာများအဟောင်းများတွင်တပ်ဆင်နိုင်သော်လည်းစနစ်၏စီးဆင်းမှုဆုံးရှုံးမှုသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် hardware အမျိုးအစားအတွက်အထူးဖြန့်ဝေမှုများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းဖြန့်ချိမှုများထဲမှအချို့သည် 32-bit နှင့် 16-bit ဗားရှင်းများအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသည်မှာ ပို၍ ယုတ္တိရှိသည်။ အများဆုံးအကျယ်ပြန့်ဆုံးသည် 32 နှင့် 64 bit support ဖြစ်သည်။
တူဖြန့်ဖြူး ခွေးကလေး Linux ကို ၎င်းသည်ထင်ရှားသောအချက်မှာလက်ရှိဈေးကွက်တွင်အင်အားအကောင်းဆုံးသော့ဒ်ဝဲနှင့်ကိုက်ညီရန်မလိုအပ်သော်လည်းအရင်းအမြစ်များအလွန်အကျွံလိုအပ်သောပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားသရွေ့ရိုးရှင်းသောအရင်းအမြစ်များရှိသည့်ကွန်ပျူတာများတွင်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ရိုးရိုးလေးပါ။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်များသောအားဖြင့်၎င်း၏အနှစ်သာရကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည့်အစဉ်လိုက်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိသည်။ Live CD / DVD များကိုလူကြိုက်များသော distros များကြားတွင်များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော်လည်းများသောအားဖြင့်ဤပုံစံကိုမသုံးသောအခြား installable ဗားရှင်းများကိုသာထုတ်လွှင့်သည်။
စီဒီ၊ ဒီဗီဒီ၊ Live CD / DVD၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသော desktop ပတ်ဝန်းကျင်များရှိခြင်း (သို့) အင်တာနက်မှတပ်ဆင်နိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေသည်သုံးစွဲသူများစွာ၏ဖြန့်ဖြူးမှုကိုစမ်းသပ်ရန် (သို့) အမြဲတမ်းသုံးရန်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာသက်ရောက်သည်။ အသိုင်းအ ၀ ိုင်းအားဖြန့်ဝေမှုကိုအပြီးသတ်မစစ်ဆေးမီစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။
အခြားအရေးကြီးသည့်အချက်များမှာသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောထုတ်ကုန်များအတွက်ဗားရှင်းများနှင့် "Spin-Offs" ကိုဖြန့်ဝေသောအခြားသူများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဂိမ်းများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်မူကွဲရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသော repositories တွင်လက်ရှိ packages ကို install ၏ကိစ္စ။ နောက်ဆုံးအရှင်းဆုံးကိန်းများဖြစ်သောလှိမ့်ထုတ်ထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုမမေ့ပါ debian, မုတ် y တော့ openSUSEတပ်ဆင်ခြင်းအသစ်ကိုပြုလုပ်စရာမလိုဘဲနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆုံးရှုံးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်စနစ်၏ဗားရှင်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။
ဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုချင်းစီသည် ၄ ​​င်း၏လက်ရှိသို့မဟုတ်အလားအလာရှိသောအသုံးပြုသူများထံရောက်ရှိရန်ရည်ရွယ်သည့်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိသည်။ ထို မှနေ၍ Laptops များအတွက်သီးသန့်ခွဲခြားနိုင်သည် (ဥပမာ Cloud ကိုအသုံးပြုရန် JoliCloud ကဲ့သို့) နှင့်ဆာဗာများအတွက်Red Hat Linux လုပ်ငန်း ၎င်းသည်အကြံ့ခိုင်ဆုံးနှင့်လက်ရှိပံ့ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခွားသောဖြန့်ဝေမှုများသည်စားပွဲခုံ၏ဗေဒဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အခြားစနစ်များနှင့်ဆင်တူသည် (ဥပမာအားဖြင့်၎င်းနှင့်အတူအကူးအပြောင်းကိုလွယ်ကူစေသည်) PearOS (Mac ကဲ့သို့ဗေဒနှင့်) ZorinoS (မည်သည့် GNOME သည်မတူညီသော ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းနှင့်အလားတူပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးနိုင်သည်) နှင့် မူလတန်း OS (ပုံမှန်အားဖြင့် built-in အိုင်ကွန်အစုနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ installation ကိုအတူ); ၎င်းတို့သည်ဂန္ထ ၀ င်ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့်ကွဲပြားမှုရှိသည်ဟုဝါကြွားနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုထိုဖြန့်ဝေမှုများတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ထိုဖြန့်ဝေမှုများသည်တိကျသောပရိသတ်ကိုရည်ရွယ်သည် သိပ္ပံနည်းကျဘယ်ဟာက, Musix, Otakux နှင့်အခြားသူများသည်မူရင်းကုဒ်ရရှိနိုင်ပါကမည်သည့်စနစ်တွင်မဆို application တစ်ခုတပ်ဆင်နိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုအခြားအုပ်စုများမှသီးခြားရပ်တည်ရန်လုံလောက်မှုမရှိပုံရသည့်သီးခြား application များကိုသာထည့်သည်။
မီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက်၊ oddities အချို့ရှိပါသည်။ Globo Linux တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းတပ်ဆင်ထားသည့်ပရိုဂရမ်များအားကျန်ဖြန့်ဝေမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းဖြင့်စုစည်းထားသည့် modobo ဖြန့်ဝေမှုတွင်တွေ့ရသည်။ မူလ directory များအမှန်တကယ်တည်ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်လျှို့ဝှက်ထားသဖြင့်မူလ directory တွင်မူလအောက်ပါလမ်းညွှန်များကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ Programs, Users, System, Files, Mount, Depot ။
နောက်ထပ်ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Igelle, ရှိပြီးသား devices များအကြီးဆုံးအရေအတွက်ကထောကျပံ့ဖို့ခြစ်ရာကနေတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင် Esther ဟုခေါ်သော desktop environment တစ်ခုရှိပြီး GTK + တွင်ရေးသားထားပြီး Webkit က rendering engine ဖြစ်သည်။
ဒီမှတ်စုကိုနိဂုံးချုပ်တော့၊ ငါထင်မြင်ချက်အရဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုမတူညီသောထူးကဲသောအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ element တစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြချင်ပါတယ်။ ဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုချင်းစီကိုဝန်းရံနေသောအသိုင်းအဝိုင်းသည်ဒီတစ်ခု၏လုပ်ဆောင်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ အသိုင်းအဝိုင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်များ (သို့) ၎င်းတို့မှမရှိခြင်းသည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် (အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုအတွက်) လမ်းပြပေးသောဥပမာများအနည်းငယ်သာရှိပြီး developer များက ပို၍ ဂရုပြုရန်နှင့်ဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်ပြtheနာများသို့မဟုတ်သံသယများမရှိခြင်းကြောင့်ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းသည်မည်သို့တုန့်ပြန်ရန်နှင့်အကူအညီပေးရမည်ကိုမသိသောကိစ္စများရှိသည်။ ထို့ကြောင့် operating system နှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်း community ပုံရိပ်သည်အခြားသူများအပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေခြင်းတစ်ခုအားမီးမောင်းထိုးပြရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ to မှဆက်လက်ပါ ၀ င်နေသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Juan Ortiz!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » အဘယ်အရာက GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုအခြားသူများနှင့်ကွဲပြားစေသနည်း။
အလွန်ပြည့်စုံ! ငါ Mageia2နှင့်အနည်းငယ်ကစားရုံမျှနှင့် console package manager ကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ drakerpm ကိုသာသုံးနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် (ထိုအရာကကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ထူးဆန်းနေပုံရသည်) ။ urpmi နဲ့ဘယ်လို packets တွေကို install လုပ်တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါသည်သင်တို့ကို link ကိုထားခဲ့ပါ http://usemoslinux.blogspot.com/p/distros.html
Vautor Bautista i Roca ဟုသူကပြောသည်
အဆိုပါ graphical ပတ်ဝန်းကျင်အရေးပါသောခြားနားချက်သည်မဟုတ်လော
Víktor Bautista i Roca သို့စာပြန်ပါ
အထူးသဖြင့်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်အထုပ်မန်နေဂျာများအကြောင်းသင်ပြောသောအခါ .... ငါ debian နှင့် kbuntu အသုံးပြုသူဖြစ်သော်လည်း ... zipper သည် package များကိုစီမံရန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်စက်ထဲတွင် opensuse ကိုကြိုးစားအသုံးပြုချင်ပါသည်။ သို့သော်အချို့သောအရာများပေါ်တွင်သာအသုံးပြုပါသည်။ ငါစီမံခန့်ခွဲသောဆာဗာများ!
Slackware သည် .tgz အစား .txz format ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စကားမစပ်၊ များသောအားဖြင့် source code အတွက်အသုံးပြုသော .tar.gz သို့မဟုတ် .tar.bz2 tarballs များနှင့်မတူပါ။
APT (terminal) နှင့် Synaptic (graph) - "Debian" နှင့်၎င်းမှဆင်းသက်လာသောအသုံးပြုသော။
ဗွီဒီယိုများ .AVI သို့ .MI ဗီဒီယိုများကိုပြောင်းလဲနည်း